Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Liverpool… (Kooxda Reds oo caawa sameyn karta rikoor aan loo baahnayn!) – Gool FM
(Brighton) 08 Luulyo 2020. Rumeynta riyada ah in Liverpool ay rikoorro kala duwan ka dhigto xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League ayaa wali taagan, waxaana ay safar u yihiin garoonka Amex Stadium si ay ula soo ciyaaraan naadiga Brighton & Hove Albion.
Reds ayaa durba hanatay horyaalka Ingiriiska xilli hore, balse waxay hadda isha ku haysaa inay noqoto kooxda hal ciyaareed uruursatay dhibcaha ugu badan, guulaha ugu badan iyo farqi gooleedka ugu badan ay ku adkaadaan kulammada taariikhda horyaalka.
Waxaa kooxda Brighton ka maqnaan doona kulankan Jose Izquierdo oo dhaawac dhanka jilibka ah qaba.
Naadiga lagu naaneyso The Seagulls ayaa qiimeyn doonta xaaladda xiddigeeda khadka dhexe ee Steven Alzate, kaasoo muddooyinkii dambe la tacaalayay xanuun gumaarka ah.
Liverpool difaaceeda bidix ee Andy Robertson ayaa la rajeynayaa inuu kulankan diyaar u noqdo inkastoo dhaawac yar uu ka soo gaaray ciyaartii Aston Villa.
Roberto Firmino, Jordan Henderson iyo Georginio Wijnaldum ayaa dhammaantood bedel kusoo galay nus-saacii ugu dambeeyay kulankii ay booqdeen garoonka Villa Park, waxaaa la rajeynayaa inay kusoo laabtaan safka koowaad ee Tababare Jurgen Klopp.
>- Liverpool waligeed guuldarro ma aysan ka soo gaarin Brighton iyadoo la ciyaareysa kulan ka tirsan horyaalka Ingiriiska, lix ciyaarood oo ay is arkeenna, Reds waxay adkaatay saddex jeer, saddexna barbarro ayay wada galeen.
>- Kooxda hanatay horyaalnimada Ingiriiska ayaa guul ka gaartay dhiggeeda siddeeddii kulan oo ay wada ciyaareen dhammaan tartammada.
>- Kulammadaas waxaa ku jira shantii kulan ee ugu dambeysay oo ay Premier League wada ciyaaraan, inkastoo saddexdii kulan ee ugu dambeysay Liverpool ay ku adkaaneysay farqi hal gool ah, sida 1-0 ama 2-1.
>- Brighton ayaa guuleysatay labo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeysay Premier League tan iyo dib u soo laabashadii ciyaaraha, waana in la eg 18-kii ciyaarood ee ka horreeyay bandowgii Coronavirus.
>- Kooxdan ayaa sidoo kale dooneysa inay labo guul oo xiriir ah horyaalka ka gaarto markii ugu horreysay tan iyo November.
>- The Seagulls ayaa guuldarreysatay dhammaan afartii kulan ee ay Premier League la ciyaareen kooxda ugu sarreysa horyaalka.
>- Guushii ugu dambeysay ee ay ka gaaraan kooxda booska koowaad ku jirta waxay ahayd guul ay Aston Villa 1-0 kaga qaateen bishii Diseembar ee sanadkii 1980-kii, waxaana goolkaas dhaliyay Michael Robinson, kaasoo markii dambe ku biiray naadiga Liverpool.
>- Reds ayaanan bannaanka gool ku soo dhalin toddobo saacadood iyo 42 daqiiqo dhammaan tartammada.
>- Haddii Liverpool ay ku guuldarreysato inay gool dhaliso kulankan oo noqon kara midkii lixaad ee xiriir ah oo ay bannaanka gool ku soo dhalin la’ yihiin, waxa uu noqon doonaa rikoorkoodii ugu xumaa ee abaarta goolasha kulammada bannaanka tan iyo 1992-kii.
>- Liverpool ayaa u baahan kaliya inay guuleystaan afar ka mid ah shanta kulan ee u harsan si ay u dhaafaan rikoorka Manchester City ee ah in dhibcaha ugu badan lagu qaado horyaalka Ingiriiska, maadaama kooxda Pep Guardiola ay fasal ciyaareedkii 2017-18 ku qaadday 100 dhibcood.
>- Haddii ay wada adkaadaan dhammaan shanta kulan ee u harsan, Liverpool waxay barbareyn doonaan rikoorka dhibcaha ugu badan ee lagu qaaday mid ka mid ah shanta horyaal ee ugu weyn qaaradda Yurub, waxaana rikoorkaas uu hadda yaallaa Juventus oo 102 dhibcood ku qaadday xilli ciyaareedkii 2013-14.
>- Sadio Mane ayaa gool ka dhaliyay 28 ka mid ah 30 koox oo uu ku wajahay horyaalka Premier League, waxaase uu ku guuldarreystay inuu gool ka dhaliyo Brighton afar ciyaarood oo uu wajahay, iyadoo kooxda kalena ay tahay Middlesbrough.
>- Mohamed Salah ayaa si toos ah ugu lug yeeshay 127 gool kaddib 147 kulan oo uu u ciyaaray Liverpool tartammada oo dhan, waxaana uu dhaliyay 92 gool, isagoo caawiye ka ahaa 35 gool oo kale.